परीक्षाको बेला के खुवाउने? – email khabar | Latest news of Nepal
परीक्षाको बेला के खुवाउने?
प्रकाशित : २०७२ चैत १९ गते ४:०८
काठमाडौं– छोराछोरी एसएलसीको परीक्षा दिइरहेको छ भने खानेकुरा के खुवाउने भन्ने चिन्ता हुन्छ । बिहानदेखि रातिसम्म पढाइमा घोत्लिएका हुन्छन् । पढदैँ जाँदा बिर्सने समस्या भएका विद्यार्थी त अझ बढी तनावमा हुन्छन् । यस्तो बेला पौष्टिकतत्त्व कम हुने भएकोले खानामा सन्तुलन मिलाउनुपर्ने हुन्छ ।
‘परीक्षाको तयारी गरिरहेका विद्यार्थीमा ब्यासल मेटाबोलिज्म ९बीएमआई० को कमी हुन्छ,’ पोषणविद् एवं पद्यकन्या क्याम्पसका सह प्राध्यापक डा। जया प्रधानले भनिन्, ‘यस्ता विद्यार्थीलाई थप शक्तिको आवश्यक हुन्छ । कार्बोहाइड्रेट, प्रोटिन र फ्याट भएको खानेकुराबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ ।’
दाल, गेडागुडी र माछामासुलाई प्रोटिन समूहमा राखेको छ । त्यस्तै, दूधजन्य पदार्थबाट प्रोटिन र क्याल्सियम प्राप्त गर्न सकिन्छ । अन्न समूहको खानेकुरा सकेसम्म प्रशोधन नगरेको हुनुपर्ने प्रधानले बताइन् । जस्तैः मैदामा बाहिरको बोक्रा हुँदैन ।
त्यसैले चोकरसहितको आटाको रोटी स्वास्थ्यकर हुन्छ । (कान्तिपुर दैनिकबाट)
बिमा कम्पनीको लापरवाही र ठग्ने प्रवृति
वैद्य माओवादीभित्र एकता –मतभेद